Acrotray: kedu ihe ọ bụ? Ọ dị mma? | Nzukọ mkpanaaka
Acrotray: kedu ihe ọ bụ? Ọ dị mma?
Aaron Rivas | 22/10/2021 06:01 | Emelitere ka 22/10/2021 06:05 | Mmemme, Windows
Enwere puku kwuru puku na ọbụna nde faịlụ dị na Windows na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ. Ụfọdụ nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche dị ka imepe ngwa na mmemme ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, nwere ike imerụ ahụ na, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-emerụ ahụ ike nke kọmputa, na-ahapụkwa ya ka ọ ghara ịdị irè ma ọ bụ nwee nsogbu nkwụsi ike na nnukwu ọdịda.
Acrotray ọ bụ Archive na nke na-emepụta ụfọdụ aghụghọ. Ọ bụ ezie na anyị agaghị akọwapụta ihe ọ bụ -ma n'okpuru-, ekwesịrị ịmara na ọ bụghị nje, ma ọ bụ usoro obi ọjọọ ọ bụla na-etinye nchekwa nke PC n'ihe ize ndụ. Otú ọ dị, ọ nwere ụfọdụ cons na-eme ka ọ ghara ịdị mkpa, na mgbe ahụ, anyị na-ekpughe ya na-ekwu okwu niile banyere Acrotraray, ihe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ dị mma ma ọ bụ.
1 Kedu ihe bụ Acroray na kedu ihe mejupụtara ya?
1.1 Ọ dị mma?
1.2 Kedu ọrụ ọ na-arụ?
2 Ihe kpatara iji gbanyụọ Acrotray na Adobe Acrobat
3 Kedu ka esi gbanyụọ Adobe Acrobat Acrotray na Windows?
3.1 Na Task Manager
3.3 Site na ShellExView
Kedu ihe bụ Acroray na kedu ihe mejupụtara ya?
Iji malite, Acrotray abụghị mmemme ma ọ bụ ngwa, dị ka ọtụtụ ndị kweere. Nke a bụ faịlụ nke Adobe Acrobat zuru ezu, otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu na Adobe, ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmepe ya. Ihe omume a bụbu otu n'ime ihe eji agụ, lelee na ọbụna dezie akwụkwọ n'ụdị PDF, yabụ bụrụ nhọrọ nbudata mbụ maka ya.
Adobe Acrobat nwekwara atụmatụ ndị ọzọ mara mma. Ọ na-enye ohere ịgbanwe faịlụ emepụtara na mbụ, yana ịtụgharị faịlụ nke ụdị akwụkwọ dị iche iche dị ka Okwu ma ọ bụ JPG, n'etiti ndị ọzọ, na faịlụ PDF na ntụgharị. Ọ nwekwara ọrụ ndị ọzọ, mana ha niile metụtara PDF.
Ugbu a, Acrotray, dị ka anyị kwuru na mbido, bụ usoro nke Adobe Acrobat. Ọ na-ebu mgbe ịmalite kọmputa Windows na, n'agbanyeghị na ọ bụ ngwá ọrụ maka mmemme, ọ dịghị mkpa kpamkpam. N'ezie, ọ ka mma ma bụrụ ihe amamihe dị na ya iji gbanyụọ ya, ebe ọ bụ na ọ na-eri ihe onwunwe, ma CPU na RAM ebe nchekwa, ya mere ọ nwere ike imetụta arụmọrụ nke kọmputa na-adịghị mma ma mee ka ọ kwụsịlata ruo n'ókè nke na a na-ahụ anya na-eji nwayọọ nwayọọ na-edezi. PDF faịlụ nwere Adobe Acrobat ma ọ bụ mgbe imeghe ma na-agba ọsọ mmemme na ọrụ ndị ọzọ.
Dị ka anyị kwuru ná mmalite, Acrotray abụghị nje ma ọ bụ ngwanrọ ọjọọ, tere aka na ya. Enweela asịrị na-egosi na nke a bụ n'ihi na ụfọdụ nje na malware akpọọla onwe ha n'ụzọ yiri nke ahụ ma ọ bụ ọbụna n'otu aka ahụ, ka e wee ghara ịhụ ya n'anya ọtụtụ ndị, mana nke bụ eziokwu bụ na, karịa ma ọ na-emepụta ụfọdụ cons na. arụmọrụ kọmputa, ọ dị mma, dịka ọ bụ usoro Adobe.
Kedu ọrụ ọ na-arụ?
Acrotray, ịbụ usoro na ndọtị nke Adobe Acrobat, abụghị ihe na-adịghị mkpa. N'ezie, nwere ọrụ akọwapụtara nke na-emetụta onye na-ekiri Adobe Acrobat na onye ndezi, na otu n'ime ha bụ imeghe na ịtụgharị faịlụ PDF na ụdị ndị ọzọ. Ọ na-arụkwa ọrụ dị mkpa ma a bịa n'ịlele mmelite dị maka Adobe Acrobat, nke mere na mmemme ahụ nwere akụkọ kachasị ọhụrụ, na-enye ọrụ dị mma mgbe niile ma nwee njirimara na ọrụ kachasị ọhụrụ nke etinyere na ụdị firmware ọ bụla.
Ihe kpatara iji gbanyụọ Acrotray na Adobe Acrobat
Ọ bụ ezie na anyị akọwapụtala isi ihe kpatara ịkwụsị Acroray bụ ezigbo echiche, ugbu a anyị depụtara ha n'ihu:
Na-akwụ ụgwọ na akpaghị aka mgbe kọmputa malitere, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa na-agba ọsọ ya ozugbo, ma na-emeghe Adobe Acrobat. Nke a na-ebelata usoro ahụ site na oge mbụ ọ malitere.
Mgbe ọ na-eri obere ebe nchekwa na akụrụngwa CPU, dabere na ngwaike, ọ nwere ike imetụta oge ntinye nke ngwa niile, mmemme na egwuregwu. Isi ihe a nwere njikọ na nke mbụ.
Ọtụtụ oge ọ dịghị mkpa inwe ọrụ ya, ọbụna mgbe Adobe Acrobat meghere. Ya mere, ihe kacha mma bụ na ọ naghị agba ọsọ.
Ọtụtụ nje na-eji ya dị ka ihe mkpuchi ka a na-ahụghị ya.
Kedu ka esi gbanyụọ Adobe Acrobat Acrotray na Windows?
Ọ bụrụ na ịchọghị ịnweta uru na ọrụ nke Acrotraray na-enye, ka ị nwee ike ịrụ ọrụ ka mma na kọmputa mgbe ị na-eme ngwa na ọrụ ndị ọzọ - na ihe omume nke nkwụsịtụ-, ị nwere ike ịnwale ụzọ atọ ndị a iji gbanyụọ ya , nke kachasị mfe, ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ.
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe iji gbanyụọ ma ọ bụ gbanyụọ Acroray. Na Task Manager enweghị ọtụtụ usoro ịme. Ihe mbụ bụ imepe ya, maka nke a, ị ga-pịa igodo ndị a n'otu oge, nke bụ. Ctrl + Alt + Hichapụ.
Ozugbo Task Manager meghere, ị ga-pịa taabụ Inicio wee chọta Adobe Acrotraray usoro / ọrụ. Ihe ikpeazụ ị ga-eme bụ iji pịa aka nri pịa ya wee họrọ nhọrọ Iji gbanyụọ. Nke a ga-akwụsị usoro a agaghịkwa arụ ọrụ ọzọ, opekata mpe ruo mgbe mmemme Adobe chọrọ ya.
AutoRuns bụ ngwá ọrụ Microsoft mepụtara nke na-adịkwa mma ma na-arụ ọrụ iji gbanyụọ Acrotraray.exe site na Adobe Systems ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ usoro ịme. Ihe mbụ ị ga-eme bụ nbudata ya, ma ọ bụrụ na etinyeghị ya na kọmputa gị; Iji mee nke a, gaa na njikọ a
Ọ dị mma ugbu a ozugbo ebudatara faịlụ abịakọrọ, a ga-ewepụrịrị ya. Mgbe ahụ ị ga-agba ọsọ faịlụ dị ka onye nchịkwa Autoruns 64.exe naanị ma ọ bụrụ na ị nwere kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ Windows 64-bit. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-agba ọsọ faịlụ Aurotuns.exe. Iji mee nke a, ị ga-ahọrọ ya ma ọ bụ pịa ya aka nri, wee chọọ nhọrọ ịgba ọsọ dị ka onye nchịkwa.
Mgbe e mesịrị, na windo nke ga-emepe, es Ihe niile, Chọọ igbe maka "Acrobat Acrobat Mepụta PDF Helper" na "Adobe Acrobat PDF from Selection", wee wepụ ha akara. na, n'ụzọ dị otú a, gbanyụọ Acroray. Ihe ikpeazụ ị ga-eme bụ nso AutoRuns wee malitegharịa kọmpụta ahụ ka ọ hụ na usoro agaghịzi amalite na akpaghị aka na PC mmalite.
Site na ShellExView
ShellExView na-arụ ọrụ dị ka AutoRuns na Windows Task Manager. Ị nwere ike ibudata faịlụ abịakọrọ nke ngwa site na njikọ a. Ozugbo ebudatara ma mepee ya, ị ga-agba ọsọ faịlụ shexview.exe dị ka onye nchịkwa. Mgbe ahụ ị ga -aga taabụ Nhọrọ na, ozugbo ị nọ ebe ahụ, chọọ ndenye maka "Adobe Acrobat Create PDF from Selection", "Adobe Acrobat Create PDF Helper" na "Adobe Acrobat Create PDF Toolbar", wee gbanyụọ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Windows » Acrotray: kedu ihe ọ bụ? Ọ dị mma?
Etu esi ebufe akwụkwọ mmado site na Telegram gaa WhatsApp